Tantara: Zazalahy Roa Velona Indray - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
RAHA maty ianao, ahoana no ho ﬁhetseham-pon-dreninao raha novelomina indray ianao? Ho sambatra aoka izany izy! Mety ho velona indray ve anefa ny olona maty iray? Efa nitranga ve izany taloha?
Rehefa tonga i Elisa, dia nankao amin’ny eﬁtrano nisy ny zaza maty. Nivavaka tamin’i Jehovah izy, ary nandry teo amin’ilay faty. Tsy ela dia nihanafana ny vatan’ilay zazalahy, ary nievina impito izy. Endrey ny hafalian-dreniny rehefa tonga izy ary nahita ny zanany velona!
Olona maro dia maro no efa maty. Nahatonga ny ﬁanakaviany sy ny sakaizany halahelo tokoa izany. Tsy manana fahefana hanangana ny maty isika. I Jehovah no manana izany. Any aoriana dia hianarantsika ny fomba hamerenany olona an-tapitrisany maro ho amin’ny ﬁainana.
Nahoana no niavaka ny ﬁnoan’ilay mpitondratena tany Zarefata? (1 Mpanj. 17:12-16; Lioka 4:25, 26)
Inona no ianarantsika avy amin’ilay vehivavy tany Sonema momba ny ﬁtiavana mandray vahiny? (2 Mpanj. 4:8; Lioka 6:38; Rom. 12:13; 1 Jaona 3:17)